Iyada oo loo adeegsanayo qaababka qaab dhismeedka casriga ah iskugeynta naqshadeynta mashiinka iyo naqshadeynta element element design, iyo isku-darka mashiinka maaraynta heerkulka qalabka farsamada guud iyo tikniyoolajiyada ergonomics, mashiinka oo dhan wuxuu gaaraa astaamaha adkaanta sare, adkaanta korantada sare, isku haleynta sare iyo heer sare. xasiloonida kuleylka, iwm.,
Z axis afarta qaab dhismeedka xarkaha siligga wuxuu leeyahay iska caabin yar oo jajabin iyo saxnaan wanaagsan.
Iyada oo Jarmal KESSLER AC uu madax wareego iyo tunto nooca qaab-dhismeedka fargeetada, xirmooyinka AC waxaa wata gawaarida torque.
Sanduuqa jiheynta Z ee qaab dhismeedka summetarka wuxuu xaqiijiyaa isku-dheelitirka jaban, iyo yaraynta kuleylka.
Kala firidhsan dabacsan oo dabacsan si habsami leh u xakameynaya kuleylka.